यस्तो छ सिरिया अक्रमणको कारण ,कुन-कुन देशको के स्वार्थ ? – Enepal Khabar
यस्तो छ सिरिया अक्रमणको कारण ,कुन-कुन देशको के स्वार्थ ?
फागुन १४ – सिरियाको समस्या आजको होइन । युद्ध सुरु हुनुपुर्व नै सिरियाली जनताहरुले बेरोजगारी, चरम भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रपति बसर अल असादको दबाबको विरोध गर्दै आइरहेका थिए । सन् २००० मा आफ्नो पिता हाफेजले कार्यभार छोडेपछि उनले सम्हालेका थिए ।
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १९:१७ मा प्रकाशित